Fanamafisana Smart - miaraka amin'ny kitapo Netatmo - SmartMe starter
20 Martsa 2021
Netatmo Tongasoa - Famerenana fakan-tsarimihetsika horonantsary HomeKit Secure!
kamera, fakan-tsary ao an-trano, netatmo, netatmo tongasoa
Mbola tsy nanana fotoana handinihako ireo fakantsary trano ihany aho. Na izany aza, azonao atao ny mamaky ao amin'ny SmartMe momba ny Aqara G2 ao amin'ny fameren'i Michał. Netatmo Welcome no fakan-tsary voalohany nisy nahafahako nisedra. Ary na dia eo aza ny manana ny ...
Smart Office 2020 - vokatra 12 izay hanampy amin'izany
Aqar, Bobot, dgm, netatmo, Philips, roborock, birao mahay, xiaomi
Isan'andro ataonay aminao amin'ny SmartMe fa mety manan-tsaina ny singa manaraka ny trano. Fa tsy trano fotsiny. Fiara Smart, tanàna sy birao. Ary te-hifantoka amin'ny farany anio aho, i.e. izay mampiavaka ...
Manohana amin'ny fomba ofisialy ny horonantsary HomeKit Secure ny Netatmo
homekit, video tsara homeko, netatmo
Andro iray lehibe no tonga ho an'ny fakan-tsary Netatmo. Manomboka anio dia manohana ofisialy ny horonantsary HomeKit Secure! Hiitatra ho an'ny mpanjifa bebe kokoa mandritra ny andro vitsivitsy ny fanavaozana fakantsary. Midika izany fa samy fakantsary Netatmo vaovao sy nampiasaina ...